ORM - Chaa Apartments
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguOporto Rental Management
I-Studio kwi-4-storey, ihlaziywe ngokupheleleyo kwirenti yabakhenkethi ngenxa yendawo yayo ephambili kwiziko lembali lasePorto, ngaphakathi kwemida yodonga "Muralha Fernandina", umzuzu o-1 uhamba ukusuka kwiCathedral kunye neLuís I Bridge.
Ineebhedi ezi-2 zabantu abangatshatanga, igumbi lokuhlambela eli-1 elineshawa, ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo, igumbi lokuhlala elinesofa ibhedi yabantu ababini kunye nebalcony enombono omangalisayo weSe, Porto's Cathedral.
Ilungele abantu aba-1 ukuya kwaba-4.
Amaxabiso ayohluka ngokwamaxesha onyaka.
Ukuba le ndlu ayifumaneki ngeentsuku ezifunekayo, jonga amanye amagumbi ethu ngeprofayile yethu.
Jonga uluhlu lwethu lweenkonzo ezongezelelweyo, eziya kuphakamisa amava akho kwisixeko sethu.
Le ndlu ibekwe eRua Chã, ogama lakhe lichaza into yokuba isitrato esithe tyaba, esineerekhodi zobukho bayo ukuya kuthi ga kwi-1293. Idlule kwizigaba ezininzi, ukusuka kwindawo yokuthengisa izixhobo zombane, ngoku idlulayo. isixa esikhulu sevenkile yokubonelela ngeenkcubeko ezininzi. Nangona kunjalo, kusekho abathengisi abancinci, ukusuka kwelinye ixesha, izindlu ezindala zamaqhosha kunye nezinto zokuluka.
Inamanqaku anomdla kwiCathedrall yasePorto kunye nebhulorho ye-D. Luís I.
Ilungele iintsapho ezinqwenela ukubhukisha amagumbi aliqela kwisakhiwo esinye, okanye izibini okanye amaqela ukuya kuthi ga kwi-4 abantu abakhetha ukuhlala entliziyweni yeziko lembali lasePorto, phakathi komgama wokuhamba kwiingongoma eziphambili zomdla wesixeko.
4.88 · Izimvo eziyi-158
Isakhiwo esinemigangatho emi-4, sahlaziywa ngokupheleleyo ngo-2016 ukurenta abakhenkethi, emi kwindawo yokuhlala, i-140m (umzuzu wokuhamba) ukusuka kwiCathedral yasePorto (Sé) kunye nebhulorho yaseLuís I edumileyo apho unokonwabela umbono ophefumlayo kunye ongalibalekiyo wembali. IRibeira kunye neCais de Gaia yanamhlanje, yahlulwe nguMlambo iDouro. Unokundwendwela ngeenyawo ezona ndawo ziphambili zabakhenkethi esixekweni, kunye nendawo apho kukho iicafe, imivalo kunye neendawo zokuzonwabisa.
I-Porto Cathedral (Sé do Porto) (140m / 1min ukuhamba)
-Luís I bhulorho (350m / 3min ukuhamba)
I-Rua de Santa Catarina-iCafé enkulu (550m / 6min ukuhamba)
-Avenida dos Aliados (400m / 5min ukuhamba)
-Ribeira (650m / 7 min ukuhamba)
- ICawa yaseS. Francisco (750m / 8 min ukuhamba)
- Mercado do Bolhão (1km / 15min ukuhamba / 5 imiz ngololiwe ohamba ngaphantsi komhlaba/itram)
-Torre dos Clérigos-Lello Library(650m / 7 min ukuhamba)
-Nossa Senhora do Carmo das Carmelitas Church (900m / 12 min ukuhamba)
Umbuki zindwendwe ngu- Oporto Rental Management
Izimvo eziyi-4 578
Siya kuvuyiswa kukwazi iindwendwe zethu kwaye siya kuhlala sikhona ukunika ulwazi, iingcebiso kunye noncedo kuyo yonke into oyifunayo.
Inombolo yomthetho: 29722/AL